उजेलीको भट्टी पसल| Nepal Pati
उजेलीको भट्टी पसल
दैनिक हजार आठ सय मानिसहरूको जमघट हुने नयाँ किरण माध्यमिक बिद्यालय ओरपर थुप्रै पसल र होटल थपिए, भट्टीहरू खोलिए । साँझ परेपछि चलाएमान हुँदै जाने होटल–भट्टीहरू अबेर रातिसम्म गुल्जार रहन्थे । दुईचार पैसा कमाई हुने स्थानीय युवाहरू यिनै होटल–भट्टीहरूमा जान्थे अनि केही गिलास मदिरामा लठ्ठीँदै घर फर्किन्थे । एक चिम्टी मुस्कानले ब्यापारलाई तेब्बर बनाउन सक्छ भन्ने जानेका तरुनी साहुनीहरू मुसुक्क हाँस्दै रक्सीको गिलास टक्¥याउँथे ।
यदा कदा ग्राहकको मनोबृत्ति हेरेर छिलिएको कुरा पनि गरिदिन्थे । भट्टी पसलमा यौटी उजेली नाम गरेकी रुपवती युवती पनि थिई । रुप हेर्नकै लागि भएपनि धेरै युवा ग्राहक उसको भट्टीमा लुसुक्क छिर्थेे । हुन पनि उजेली विश्वसुन्दरीजस्तै थिई । गीत गाउनमा उस्तै खप्पीस थिई उजेली । उस्तै परे ऊ ग्राहकसंग आधा रातसम्म गीत गाएरै बसिदिन सक्थी । उसको लोग्ने मानबहादुर पनि गीत गाउनमा कम कहाँ थियो र तर ग्राहक नभडकिउन् भन्ने अभिप्रायले प्राय ऊ परै बस्थ्यो ।
दुई बर्ष अघि ईलम बजारको मेलामा मानबहादुर र उजेलीको पहिलो भेट भएको थियो । अनि चल्यो दोहोरी । दोहोरी एक रात एक दिनसम्म लगातार चलिरहह्यो । अन्त्यमा मानबहादुरले जित्यो । उजेली हारी । पूर्बसर्त अनुसार उजेली मानबहादुरकी श्रीमती भएर आई । उजेली जस्ती हँसिली, रसिली र जाँगरिली श्रीमती पाएकोमा मानबहादुर दङ्ग थियो । रस रङ्गमा रुचि हुने युवाहरू साँझ प्राय उसैकोमा जान्थे ।
एक दिन रक्सीको मात चढ्दै गर्दा पच्चीस बर्षे लक्का जबान असारेले उजेलीलाई सोध्यो– ‘रक्सी मीठो कि साहुनी मीठी हुन् भेऊ पाउनै सकिन !’ असारे रसिक हुन थालेको चाल पाएर मानबहादुर भट्टीबाट खुसुक्क बाहिरियो । ‘साहुनी नमीठी भाकीभा हाम्रा बूढाले ईलमबजारदेखि ल्याउँते त !’ मुस्कान सहित जुनेलीले भनी ।‘जाने हो त मसंग ? के छ बिचार !’ असारेले झनै रसिक भयो । ‘लानलाई मेरा बूढाको जस्तो आँट चाहियो नि आँट । मलाई पाउन एक रात एक दिन खर्लप्पै गाएर छिचोलेका थिए ।’ ‘रात छिचोलेर हुने भा म पनि आज यतै बसिदिउँला नि !’‘नानीको खुट्टी देखेर चाल पाईयो…!’ बूढी औँला हल्लाउँदै उजेलीले भनी ।
‘म के कुरोमा कम छु भन्ठानेकोे तिम्ले ? ईण्डिया छँदा मत्ता हात्ति वशमा पारेकोे मान्छे हुँ क्या !’ ‘भोभो धेरै फुर्ति नलाउ । श्रीमती देख्यो कि रुझेको बिरालो जस्तो हुन्छौं ! मलाई था छैन !’ ‘मेरी श्रीमती चोर औला ओठमा राखेर चुप ! भन्नासाथ थरथरी काम्चे । के कुरा ग¥या तिम्ले ।’ ‘स्वास्नीका पछाडि जति फुइँ लाए पनि भो नि ! बरु भन, एक क्वाटर थपूँ ?’ उजेलीले सोधी । ‘सुत्ने ठाउँ दिने भए थप्चु नि, किन नथप्नू ! दिने हो सुत्न ?’ ‘मैले तिम्लाई नसुत भनेकी छु र ।’ ‘उसो भए देऊ न त ।’ उजेलीले थप एक क्वाटर टक्¥याई । ‘असारेलाई रक्सी सुँघ्यो कि लायोे ! एक क्वाटर खाँदैमा बोलि लरबरिईसक्यो !’‘बोली लरबराए पनि शरिर लरबरा छैन क्या । भन, हाम्रो ओछ्यान कता हो ?’ ‘उ त्याँ भुइँमा सुत्नी !’
‘दया माया न भाकी निठूरी ! खाट के त ?’ ‘खाटामा बूढो र म सुत्न परेन ?’‘अनि म एक्लै …..!’ लरबराएको बोलीमा असारेले भन्यो ।
‘घराँ स्वास्नी छँदैछन् नि । घर गर सुत्नी !’ ‘मलाई त्यो राँडसित सुत्नै मन लाग्दैन भन्या ! लोग्ने देख्यो कि ठास्सठुस्स गर्न थाल्चे !’
‘ बेलाँ घर जान पर्यो नि । यति खाईसकेर जाउ ।’असारेले छिटोछिटो रक्सी तान्न थाल्यो । ‘जान्चुजान्चु तिम्राँ बस्तिन । आउनीलाई स्वागत जानीलाई वाईवाई भन्या यै हो ।’ असारे रिसाए जस्तो ग¥यो । त्यतिखेर ै असारेकी श्रीमती लठ्ठी बोकेर भट्टीमा छिरी । श्रीमती आएको देखेर असारे निलोकालो भयो । ‘के भो ? किन ठुस्सिएकी त्यसरी ?’ के भनूँ नभनुँ भएको असारेले भन्योे ।
‘दिनदिनै आधारातसम्म कुकुरको मुत धोक्नेसित हाँसि राख्न प¥यो हैन म ! एक दिन हैन, दुई दिन हैन ! ल खा….!’ उसले असारेको तीघ्रामा एक स्वाँठ हानी । असारे मरे बाबा ! भन्दै सुइँकुच्चा ठोक्योे । श्रीमती असारेलाई लघार्दै पछिपछि दगुरी । असारेलाई श्रीमतीले लघारेको केहीबेरमैँ रमन भट्टीमा पस्यो ।
‘आउनुस् आउनुस् रमन सर ! आज निकै ढिलो गर्नु भो ?’ जुनेलीले मुस्कुराउँदै भनी । ‘केटी हेर्न पालुङटार गाथेँ । आउँदा आउँदै ढिलोभो ।’ उसले भन्यो ।‘यसै साल झ्याइँ झ्याइँ बाजा बजाउने बिचार छ कि क्या हो सरको ?’ ‘भ न्या त हो तर जस्ता तस्ता आँखै लाग्दैनन् । तिम्रो रूप देखेपछि त झन सबै फिका लाग्चन् ।’ ‘आ.. सर पनि ! हामी भन्या मुतान्यानो हौँ सर ! अब बिहा गर्न तीर लाग्नुस् ।’ उजेलीले भनी ।
उजेलीले रमनलाई सँधैको झैँ एक क्वाटर रोयल स्ट्याग र एक प्लेट मासु टक्¥याई । रमन मासुको चौटा लुछ्दै रक्सी तान्न थाल्यो । ‘आफू ताक्चु मुढो बञ्चरो ताक्च घुँडो भने जस्तो कुरा नगर न उजेली ।’ रक्सी तान्दै उसले भन्यो ।
‘यौटी आईमाई कति टुक्रामा बाँडिनसक्चे र सर ! बिहा गर्नुन्च भने मैले यौटी खासा केटी देखेकी छु ।’ ‘काँकी केटी भन त ?’ ‘हाम्रो यतै की । खुब राम्री, टाठी पनि । सरले कस्ती खोज्नुभा हो ?’ ‘तिम्ले कस्का कुरा गरेकी ?’ ‘सरकै स्कुलमा पढाउँचिन् । ऊ क्या चन्द्रप्रसादकी छोरी शारदा ।’
‘त्यो घमण्डीको कुरै नगर । जो कोहीलाई मान्छे गन्दिन ।’ ‘नथ्थी लाउन जान्नुुप¥यो नि सर !’ ‘त्यै त, त्यो घमण्डीलाई नथ्थी नलाई नहुनी भाछ ।’ रातको साँढे दश बजिसकेको थियो । रमन छिटोछिटो रक्सी तानेर निक्लियो । श्रीमतीको खेदाईमा पर्दा असारेको आधा नसा उत्रिसकेको थियो । ऊ लामालामा पाईला चाल्दै घर पुग्यो । भात खानुअघि असारेले खाएको सबै वान्ता ग¥यो । ‘यसरी थाम्नै नसक्नी गरी खानी हो त ?’ श्रीमती कराई । ‘धेरै नकराउ न । मलाई रक्सी लाकै छैन क्या ।’ ‘नलाग्या भए अझै धोक् न त ।’ ‘मेरी मैयाँ कति राम्री ! आई लव यु मेरी बूढी !’ असारेले आफ्नो ओठ श्रीमतीको ओठमा बलजफ्ती जोड्यो ! ‘थुईक्क ! घिच्न पनि कति घिचेको रैच त ! वा.. वाक..! वान्तै होलाजस्तो भो मलाई त ।’ मुख बिगार्दै उसले भनी ।
कथाको यो भाग लेखकको प्रकासोन्मुख उपन्यास ‘अन्तराल’बाट साभार गरिएको हो ।